Dagaaladii Somaaliya Iyo Ethiopia (Qaybtii 6aad) | Salaan Media
Dagaaladii Somaaliya Iyo Ethiopia (Qaybtii 6aad)
Isla markaaba, sida taariikhda lagu hayo, Imaam-ku waxaa uu cagta mariyay degaamada agagaarka webiga Hayq iyo kiniisadahii Lalibela. Imaamku waxaa uu galaalufay gobolada Tigray isagoo jebiyay ciidamadii boqortooyada faca weyn ee Axum. Halkaana waxaa uu ku burburiyay kiniisadda Lady Mary ee Zion-ka taasoo muddo boqolaal sannadood ah laga soo duubi jiray ama laga soo caleema saari jiray boqortooyada.
Xabashidu waxay hiil ka raadiyeen dalka Portugese oo markaa dunida ka arriminayay. Balse, toban sannadood ka dib, 10kii February 1541, ayaa ciidamada Portugese-ku ka soo degeen marsada Massawa.
Dagaalka waxaa loo muujiyay mid diineed, sidaa darteed, Imaam-kuna waxaa uu taageero ka helay dunida Islaamka iyo Masar. Dunida Carbeed oo Masar hor kacayso waxaa ay u la soo gurmadeen ciidan gaadhaya 2000 oo ku hubaysan qoryaha (musket) dhuunta dheer. Dhinaca kale, Turkiga ayaa ku kaalmeeyay hub, saanad iyo 900 oo ka tirsan ciidamda Boqortooyada Cismaaniyada (Ottoman troops).
21ka February 1543 waxaa la muquuniyay Imaam Axmed Gurey ka dib markii ay ka gacan sarreeyeen ciidanka Portugues-ku oo tiradooda lagu sheegay 9,000. Waxaa la jebiyay ciidamadii huwanta ahayd ee Muslimiinta oo tiradoodu dhammayd ilaa 15,000. Halkaasna waxaa ku geeriyooday Allah ha u naxariistee Imaam Axmed Gurey.
Hase ahaatee, waxyeelada Imaam Axmed Gurey uu gaadhsiiyay Ethiopia waxaa lagu tilmaamaa mid laga soo waaqsan karin welina ka sii guuxaysa dhegaha dadka reer Ethiopia Halka ka akhri.
Boqolaal sannadood ka dib, dagaaladii Imaam Axmed Gurey waxaa laga sii xusuusan yahay labda dal. Sidaa awgeed, Somaalida weli waxaa loo arkaa inay yahiin halis ku yahiin xasiloonida Geeska Afrika. Inkastoo laga murmo jinsiyadda uu ka soo jeeday Axmed Gurey, haddana, shaki kuma jirin ciidanka uu adeegsanayay inay Somaali ahaayeen. Somaaliduna waxay Imaamka u arkayeen hoggaamiye ugu aar gudayo gar-darrooyin ay Xabashida ka tirsanayeen.
“Ethiopia, weli ma iloobin waxyeeladii uu gaadhsiiyay Axmed Gurey,” sidaa waxaa buug uu qoray (Layers of Time) ku sheegay taariikh-dhaadhiga Paul Henze.
“Buuralayda, qof kasta oo Masiixi ah, yaraantiisii, waxaa loo laqimay sheekooyinka cabsida badan ee Axmed Gurey. Inta badan, waqooyiga Ethiopia waxaa farta lagu fiiqaa taalooyin, kiniisado, qalcaddo iyo goobo diineed oo la sheego inay ka sii hadheen burburkii dagaaladii Axmed Gurey, sidii ay shalay dhaceen. ”
Si kastaba ha ahaatee, xeel-dheerayaashaa u kuur-gala taariikhdu waxay isku raacsan yahiin dagaalka Imaamku in aanay ka madhnayn muranka biyaha Niilka iyo in Masaaridu arrinka u dhigeen colaad diineed.
Tusmada Waayahii Colaadda
• 1960-1964 – Dagaalo ka dhashay muranka soohdimaha labada dal.
• 1977-1978 – Dagaalkii Ogaadeeniya
• 1982 – Dagaal ka qarxay xuduudda labada dal
• 1998-2000 – Xislooni-xumo iyo xasard ka oognayd isaga talowga (cross-border) labada dal.
• 2006 July – Maxkamadaha Islaamka ayaa la wareegay taladii caasimadda Muqdisho.
• 2006 December – Qabsashadii Muqdisho ee ciidamada Ethiopia iyo dawladda ku meel-gaadhka.
• 2007 March – Ciidamad Afrika (AMISOM) ayaa ka degay Muqdisho iyadoo ay u sii gogol xaadheen ciidamada Ethiopia iyo kuwa dawladda KMG.
• 2008 May – Ra’iisal Wasaare Meles Zenawi ayaa ku dhawaaqay in ciidamada Ethiopia ku sii nagaan doonaan Somaaliya ilaa iyo inta laga jebinayo waxa uu ku sheegay “jihaad oogayaal”.
• 2008 June – Dawladda KMG iyo Mucaaradka isu bahaystay dib u xoraynta Somaaliya ayaa kala saxeexday heshiis xabbad-joojin muddo 3 bilood ah si ciidamada Ethiopia dalka ugaga baxaan 120 maalmood. Heshiiska waxaa ku gacan saydhay Hoggamiyaha Maxkamadaha Islaamka Shiikh Xassan Aweys isagoo sheegay inay dagaalka sii wadi doonaan ilaa iyo inta ninka ugu danbeeya ee ajnebi ah uu dalka ka baxayo.
• 2009 January – Ethiopia Waxay dhammays tirtay inay ciidamadeeda kala baxdo Somaaliya. Durbaba, Baydhabo ayaa u gacan gashay Xarakada Al Shabaab.
• 2011 November – Ciidamada Ethiopian ayaa laga soo sheegay Guri-Ceel iyo galbeedka dalka.
Dagaalkii Ogaadeeniya 1977-1978
Dagaalkii Somaaliya iyo Ethiopia (1977) waxaa lagu tirayaa inuu ahaa kii ugu waxyeelada badnaa ee dhex maray labada dal. Dagaalka waxaa qayb ka ahaa quwadaha adduunka, waxaana ku dhafnaa siyaasad caalami ah oo biyo hoostood ay ku dirirayeen dawladaha waaweyn.
Run ahaantii, halka kuma soo koobi karno sida wax u dhaceen, hase ahaatee, annaga oo ka soo xiganayna buugga qiimaha badan, Dagaalkii Qaboobaa ee Adduunka, “The Global Cold War” ee uu qoray Proffessor Arne Westad waxaan kor ka xaadin doonnaa qoddobo dhowr ah.
? Ruushku waxaa uu soo tubay 11,600 askar Cuba ah iyo 6,000 oo khabiir dagaal ah.
? September 1977, caasimadda Moscow waxaa laga abuuray kaabad-cireed (air-bridge) taasoo dayuuradaha Ruushku ku soo daad-gureeyeen hub qiimahiisu kor u dhaafay $1,000 Million oo ku sii qulqulayay Ethiopia.
? Laba guuto oo sii fiican loo hubeeyay ayaa ka soo gurmaday Koonfurta Yaman (Cadan) si ay u xoojiyaan ciidamada Xabashida.
Professor Westad waxaa uu buuggiisa ku iftiimiyay in La-taliyahii Madaxweyne Jimmy Carter ee dhinaca nabadgelyada qaranka, Zbigniew Brzezinski uu sheegay: “ciidda Ogaadeeniya waxaa ku duuggan is-ku-soo dhowaansho dhex maray USA iyo Ruushka -detente-.”
Si aad uga bogota arrinka waxa aad akhrin kartaa buugga Ummaddii La dhagray “The Betrayal of the Somalis” ee uu qoray Louis FetzGibbon (halka ka dalbo).
Dabcan, Somaalida ayaa ahayd cidda la dhagray, Waxay ahayd markii ugu horreysa, taariikhda, in labadii awoodood ee dunida ka talinayay ay u wada heshiiyeen dal kale. Sommaalida ayay ahayd dadka loo adeegsaday dagaal aanay lahayn (proxy war) iyadoo lagu fuliyay ujeeddoooyin badan. Waxaanna ka xusaynaa dagaalku inuu u qorshaysnaa; 1. In la jebiyo isla weynida iyo hanka Somaalida. 2. In colaad joogta ah la dhex dhigo labada dale e deriska ah. 3. In la wiiqo awoodda Somaalida ee dhabarka ku haysay dunida Islaamka iyo Carabta. 4. Iyo, sidii caadadu ahayd, in Masaridu Somaalida u adeegsato ilaalada danaheed Biyaha Niilka.
Saamaynta Dagaaladii Somaaliya Iyo Ethiopia
Gelitaanka Dagaalka Ka Bixidda Dagaalka Tirada Ciidanka
Tirada Dadweynaha Khasaaraha (Geerida)
Cuba 1975 1987 150000 8700000 2000
Jabhadda WSLF 1964 1987 50000 1000000 5000
Somalia 1964 1987 50000 5000000 15000
Faahfaahinta dagaalada 1964, 1977, siraha soo ifbaxay iyo midka hadda laga qorshaynayo Xamar waxaad ka akhrin doontaa qaybta 7aad ee Colaadda Biyaha Niilka iyo Saamaynta geeska Afrika.